Candy Crush အဆင့် 437 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush အဆင့် 437 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ဇူလိုင်လ 19, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
သင်နေထိုင်ရာတစ်နေရာတည်းတွင်မှီခိုနေရခြင်းအတွက်သင်စိတ်ဆိုးနေပါသလော? ဒီရည်မှန်းချက်ကိုမရရှိလျှင်သင်၏ဘဝသည်ရည်မှန်းချက်မရှိဟုခံစားရသလား? ဟုတ်တယ်, အကယ်၍ သူတို့ကဂိမ်းတစ်ခုတွင်အချို့အဆင့်၌ရပ်နေလျှင်ဘ ၀ ၌လူများစွာသည်အလားတူခံစားမှုမျိုးရှိသည်. အကျိုးဆက်, သကြားလုံးကြိတ်ခြင်းအဆင့်ကို မရှင်းလင်းဘဲ ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေရန်မှာ ခက်ခဲသည်။. ပြည်သူတွေအတွက် ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကို ရှင်းဖို့ပါ။, ကျွန်ုပ်တို့သည် ပူဇော်ခြင်းဖြင့် လွယ်ကူသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ သကြားလုံးနှိပ်စက်မှုအဆင့် 437 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ.
အတိအကျ, တူညီတဲ့ အဆင့်မှာ ရပ်တည်နေရလို့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့။. ဒါက ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဆင့်ပါ။. နောက်ပိုင်းတွင်, အဆင့်မပြီးမချင်း လူတစ်ယောက်က ဘာကိုမှ မပျော်ဘူး။. ဒါပေမယ့် အဆင့်ကိုကျော်သွားတဲ့အခါ သူဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာ သင်တွေးကြည့်နိုင်မလား။? သူ့ခံစားချက်ကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။, ပျော်တယ်။, ကျေနပ်သည်။, စိတ်သက်သာရာ ရစေတယ်။.
သကြားလုံးနှိပ်စက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် 437 အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။. တကယ်ပါပဲ, ရှင်းလင်းရန် အသုံးပြုသူတစ်ဦး လိုအပ်သည်။ 30 ဂျယ်လီနှစ်ထပ်. ဒီအပြင်, user က အမှတ်ရမယ်။ 60,000 အမြင့်ဆုံးကြိုးစားမှုဖြင့် အမှတ်များ 50 သို့ 60 ရွေ့လျား. The problem lies with the cake wheels which cover most of the jellies. You will first need to clear those to reach to the jellies. စိတ်မပူပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနေရာတွင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ သကြားလုံး Crush အဆင့် 437 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ?
ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသည်မှာ လူများသည် အခက်အခဲများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး ဤအဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်ရန် အချိန်များစွာ မြှုပ်နှံထားကြသည်။. သို့သျောလညျး, ရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့် ဤအရာကို မရှင်းလင်းနိုင်ကြသေးပါ။. ဒါအတွက်, ဖော်ပြထားသော လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အကြံပြုချက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆောင်လာပါသည်။.
ရှိပါတယ်3ဤအဆင့်တွင် ဂျယ်လီများနှင့်တွဲထားသော ကိတ်မုန့်ဘီးများ. သင်၏ ကနဦးတာဝန်မှာ ထိုကိတ်မုန့်ဘီးများကို ရှင်းလင်းရန်ဖြစ်သင့်သည်။. ထို့ကြောင့်, အထူးသကြားလုံးများ၏ ထုပ်ပိုးထားသော နှင့် မထုပ်ပိုးထားသော ပေါင်းစပ်များကို အသုံးပြုပါ။. ဤပေါင်းစပ်မှုများသည်အခြားဂျယ်လီများအတွက်သင်၏ရွေ့လျားမှုကိုကာကွယ်ရန်ကူညီခြင်းဖြင့်တစ်ဘီးတည်းကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်
ထို့အပြင်, ဂျယ်လီငါးများကိုရှောင်ရှားရင်းထိပ်ဂျယ်လီများကိုရှင်းလင်းပါ. jellyfish ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောထိပ်ဆုံး meringues ကိုပထမ ဦး စွာကိုင်တွယ်ပါ. ထို့အပြင်, သငျသညျ jellyfish ကိုသက်ဝင်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်သင့်ပါတယ်. ဤရေခဲငါးများသည်သင့်ကိုကိတ်မုန့်ပေါ်သို့လှည့်စားရန်ကူညီနိုင်သည်.
ဒီပြီးနောက်, ဂျယ်လီငါးများကိုအထူးသကြားလုံးများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ကြိုးစားပါ. ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောဂျယ်လီနှင့်ကိတ်မုန့်ဘီးများကိုရင်ဆိုင်ရန်အားကောင်းသော powerup များကိုပြုလုပ်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်. အကယ်၍ သင်သည် ရောင်စုံဗုံးတစ်လုံးကို ဖန်တီးနိုင်လျှင် ၎င်းသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါ စွမ်းအားမြှင့်စက်များသည် ပြင်းထန်သောလက်နက်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။. အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်သော်, အကယ်၍ အဆင်မပြေပါက ထုပ်ပိုးထားသော သကြားလုံးများနှင့် ရိုးရှင်းသော သကြားလုံးတွဲများကို မှီဝဲနိုင်ပါသည်။.
Jellyfish များသည် အခြားအရောင်တူ သကြားလုံးများနှင့် လိုက်ဖက်သောကြောင့် အကောင်းဆုံးလက်နက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။. ရေကူးပြီး ဂျယ်လီတုံးတွေကို စားလိမ့်မယ်။. ရလဒ်ကတော့ ဒီလိုပါ။, သင့်အား အမှတ်များစွာပေးမည့် သကြားမှုန့်ကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။.
မျှော်လင့်ပါတယ်။ သကြားလုံး Crush အဆင့် 437 အကြံဥာဏ်များနှင့် လှည့်စားမှုများ သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။. ယခုမှာ, you pass this level without much difficulty.